Shiinaha OEM wajiga aasaaska qurxinta dareeraha jumlada astaanta gaarka loo leeyahay ee vegan foundation warshad qurxinta iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qurxinta Iris
OEM wejiga aasaaska qurxinta dareeraha jumlada sumadda gaarka loo leeyahay ee vegan foundation qurxinta
Aasaas fudud oo leh caymis heer sare ah iyo dhammaystir maati ah. Caymis buuxa wuxuu sidoo kale u shaqeeyaa si loo xakameeyo dhalaalka loona jaangooyo midabkaaga maalinta oo dhan. Laakiin halkaas kuma joogsan: aasaaskan caadiga ahi wuxuu ku habboon yahay caadi, saliid, isku dhafan, iyo noocyada maqaarka ee xasaasiga ah.
Aasaaska dareeraha wuxuu leeyahay qaab jilicsan oo jilicsan, siyaadinta wanaagsan, fududahay in la iska riixo, ha xoqin, waxayna bixisaa dabool buuxa. Waxay si wax ku ool ah u dabooli kartaa cilladaha maqaarka sida nabarrada finanka, dhibco madow oo wajiga ah, wareegyo mugdi ah indhaha hoostooda, maqaarka oo aan sinnayn iyo daloolada weynaaday. Wuxuu midabku ka dhigayaa mid dhalaalaya oo qurux badan, isagoo maqaarka ka dhigaya mid gebi ahaanba dabiici ah.
Aasaaska dareeraha wuxuu leeyahay shaqo qoyn iyo biyo xireyn. Waxay ka kooban tahay caddeynta iyo huurka iyo hagaajinta maaddooyinka si loo ilaaliyo maqaarka, loo daboolo khadadka ganaaxa iyo laalaabyada, maqaarkana looga dhigo mid aad u fiican.
Qaaciddada muddada-dheer, biyo-la'aanta ah, iyo dhididka-caddaynta ayaa kuu oggolaanaya inaad dayactirto qurxinta quruxda dheer ee maalinta oo dhan. Daryeelka aasaasiga ah ee miisaanka fudud wuxuu kordhin karaa dhalaalka, wuxuu iftiiminayaa midabka maqaarka wuxuuna maqaarka ka dhigayaa mid jilicsan.
Magaca Shayga Aasaaska
2. Vegan / Paraben bilaash / saliid la'aan
4. Siman, caymis buuxa
5. Dhammaan noocyada maqaarka
2.Q: Immisa midab ayaad u leedahay aasaaska?
J: Midabada aasaasiga guud ahaan waxaan kuu heynaa 30 midab oo aad adigu dooratay, sidoo kale waxaan u habeyn karnaa midabadaada.
Hore: Aasaaska aasaasiga ah ee tayada sare leh aasaaska caymiska buuxa astaanta asturnaanta dareeraha aasaasiga ah ee biyuhu mareenka ah
Xiga: nuurad jilicsan oo jilicsan jumlad jilicsan oo sumad gaar ah u leh soosaaraha macmalka dabiiciga ah
aasaaska sumadda gaarka loo leeyahay
aasaaska dareere sumad gaar ah